musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Austria Kuputsa Nhau » Austria: Hapana vapoteri veAfghan vaida!
Afghanistan Kuputsa Nhau • Airlines • nhandare yendege • Austria Kuputsa Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • tsika nemagariro • dzidzo • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Chancellor weAustria Sebastian Kurz
Dambudziko nderekuti "kubatanidzwa kwevaAfghan kunonetsa kwazvo" uye kunoda kuyedza kwakakura kusingakwaniswe neAustria parizvino, akadaro Kurz. Ivo vanowanzove nedanho repasi redzidzo uye hwakasiyana zvachose hunhu zvichienzaniswa nevamwe vasara venyika, akadaro, achiwedzera kuti inopfuura hafu yevechidiki veAfghan vanogara muAustria vanotsigira mhirizhonga yechitendero.
Austria haidi chero vapoteri veAfghan.
Kubatanidzwa kwevaAfghan munharaunda yeWestern "kwakaoma kwazvo".
Austria yatove nenzvimbo yechina pakukura kwenzanga yeAfghan munyika.
Vanopfuura zviuru gumi nezviviri zvevanhu vakaburitswa kubva muKabul nemaUS nekumadokero vabatana mushure meguta guru reAfghanistan rakawira mumaoko evapanduki veTaliban pakati paNyamavhuvhu.
Vazhinji vevapoteri veAfghan vanozopihwa hupoteri muUSA, asi iyo European Union yakabvumawo kutora vanhu makumi matatu veAfghan.
Ipo Germany neFrance zvakaratidza shungu dzekugamuchira vapoteri, Austria yaive pakati penyika dzakaramba zvachose pfungwa yevanosvika vazhinji veAfghan.
Chancellor weAustria Sebastian Kurz akazivisa kuti Austria inotova nevanoenda zvakakwana vanobva Afuganisitani, uye nyika haizotora chikamu mukugariswa kwevapoteri veAfghan vakaburitswa kubva kuKabul mushure mekutorwa kweTaliban.
"Hatigamuchire maAfghans anotiza kupinda munyika yedu chero bedzi ndiri musimba," akadaro Sebastian Kurz muhurukuro yanhasi nepepanhau reItaly La Stampa.
Kurz akasimbisisa kuti chinzvimbo chehurumende yeAustria panyaya iyi "chaivepo" uye hazvireve kuti pakashaikwa kubatana nemimwe misoro yeEU kune chikamu cheVienna.
"Mushure mekunge vanhu vanopfuura ma44,000 maAfghans vasvika munyika yedu mumakore achangopfuura, Austria yatove nharaunda yechina pakukura kwenzanga yeAfghan munyika" pamunhu, chancellor akayeuchidza.
Dambudziko nderekuti "kubatanidzwa kwevaAfghan kunonetsa kwazvo" uye kunoda kuedza kukuru izvo Austria isingakwanise kuwana panguva ino, akadaro wezvematongerwo enyika ane makore makumi matatu nematatu. Ivo vanowanzove nedanho repasi redzidzo uye hwakasiyana zvachose hunhu zvichienzaniswa nevamwe vasara venyika, akadaro, achiwedzera kuti inopfuura hafu yevechidiki veAfghan vanogara muAustria vanotsigira mhirizhonga yechitendero.
Vienna yakanga ichine shungu dzekubatsira vanhu vemuAfghan vanonetsekana, sezvo yanga ichipa mamirioni makumi maviri ema euro kubatsira nyika dzakavakidzana neAfghanistan kugarisa vapoteri, Kurz akadaro.
Asi the European Union marongero kubva panguva yedambudziko ra2015 rekuenda kune dzimwe nyika - apo mazana ezviuru zvevanhu vari kutiza kunetsana kuNorth Africa neMiddle East vakaunzwa mumusangano - "haigone kuve mhinduro yeKabul kana European Union", Kurz akadaro .
Mutungamiri weAustria akasimbirira kuti "zvino zvave pachena kuhurumende dzese dzeEurope kuti kutama zvisiri pamutemo kunofanirwa kutorwa uye kuti miganhu yekunze yeEurope inofanira kuchengetedzwa" kugadzirisa dambudziko iri.
Sebastian Kurz anotenda kuti European Union inofanira kushanda kuputsa "bhizinesi modhi" yevanotengesa vanhu vanoendesa vanhu kuEurope. Kana vari ivo vanoenda kune dzimwe nyika, vanofanirwa kutenderedzwa kumiganhu yeEU vodzoserwa kunyika dzavanobva kana kunyika dzakachengeteka dzechitatu-bato.